02 October – Maalinta Caalamiga ee Kahor-tagga Xadgudubka ka dhanka ah Wariyayaasha. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 4, 2017	0 177 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – 11-kii sano ee lasoo dhaafay, tiro dhan 930 wariyayaal ah ayaa loo dilay soo tebinta warar iyo warbixinno bulshadoodu u baahan tahay. Celcelis ahaan, tani waxay isku ururinaysaa 1 dhimasho afartii maalmoodba. 90% dilalka wariyaasha loo geysto ma noqdaan kuwa la isku qabto oo aan maxkamad loo soo istaajinin. Si kale marka loo yiraahdo, 10% ayaa dhacda in gacanta lagu soo dhigo eedeysanayaasha dilalka u geysta suxufiyiinta.
Previous: Sahan lagu ogaaday in labada gacmood mar qura wax lagu wada qori karo!
Next: Ciidamada Itoobiya Xal ma u yihiin Mushkiladda amni-darro ee dalka ka taagan?
Baraha Bulshada – Bar-kulan lagu xad-gudbo Xurriyadda Qofka.
La kulan: Wiilkii – si uu dib ugu hantiyo Jaceylkiisa – Cunnada kaga soomay.